Ogaden News Agency (ONA) – Shir-sanadeedkii Jaaliyadaha Pacific-iga oo si habsami uga Socda Melbourne iyo Hawlihii Maalintii 1aad ee Shirka
Shir-sanadeedkii Jaaliyadaha Pacific-iga oo si habsami uga Socda Melbourne iyo Hawlihii Maalintii 1aad ee Shirka
Posted by ONA Admin	/ April 6, 2015
Waxaa shalay oo ay tahay taariikhdu 5/4/15 abaarihii 5tii galabnimo ka furmay hool wayn oo loo asteeyay inuu ka dhaco shirka jaaliyadaha Pacific-ga, waxaana shirka marti galisay jaaliyada Ogaadeeniya ee Melboune oo si aada u diyaarisay.
Hoolka waxaa shirka ku daadihinayay halgame Xasan Cabdi Qubi. Waxaa shirka lagu furay sida caadada u ah shirarka jaaliyada ogaadeeniya aayadaha quraanka kariimka iyo wacdi diiniya oo uu soo jeediyay sheekh Fadxi Muxumed Khaliif oo dadwaynihii shirka ka soo qayb galay kula dardaamay in Alla ka cabsiga oo lagu dadaalo ay tahay furaha khayrka aduun iyo aakhiraba. Wuxuu kaloo sheekha aad ugu nuuxnuuxsaday xaqnimada halganka iyo inay mudan tahay in lala garab istaago laguna taageero naf iyo maalba.
Intaa ka dib waxaa shirka si rasmiya u furay gudoomiyaha jaaliyada Victooriya halgame Xasan Axmed nuur dheere oo dhamaan ka soo qaybgalayaashii uga mahad celiyay kasoo qaybgalkooda shirka iyo waliba sida ay jaaliyada Ogaadeeniya ee Victoria u soo diyaarisay shirkan qiimaha badan ee lagu lafa gurayo qadiyada Ogaadeeniya ee JWXO hogaaminayso, isagoo raaciyay wax qabadka jaaliyada Victoriya oo ah jaaliyad ku caan baxday fashilinta tabaha qarsoon iyo kuwa muuqda ee gumaysatada Itoopoyo ay u soo sarfiso Australia.
Intaa ka dib wuxuu halgame Xasan Qubi ku soo dhaweeyay codbaahiyaha Isuduwaha JWXO ee Pacific-iga halgame Aadan Ibraahim C/raxman (aadan dakhare) oo ugu horayn u mahad naqay jaaliyada Pacific-iga sida qiimaha leh ay uga soo qayb galeen shirkan balaadhan ee sanadlaha ah oo kan kiisii lagu qabtay magaalada Perth. Wuxuu isuduwuhu sawir fiican ka bixiyay sida jaaliyada Pacific-igu u hawlgalaan, isku xidhkooda, dadaalkooda, hawlkarnimo iyo sida dhaw ay ula socdaan dhaqdhaaqa gumaysiga ee gudo iyo dibadba. Wuxuu isuduhu cadeeyay in jaaliyada Pacific-iga ay yihiin jaaliyadaha laf dhabarka u ah halganka Ogaadeeniya wuxuuna sii faray inay dadaalkooda sii labanlaabaan inta laga hanan guusha kama dambaysta
Ka dib, waxaa madasha lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha jaaliyada Waqooyi Austaliya halgame Asad Cabdulaahi Cumar oo salaan kadib u mahadceliyay jaaliyada marti galisay shirka ee Melboune soona gaadhsiiyay salaan uu uga siday jaaliyada Perth isagoo war bixin kooban ka bixiyay jaaliyada uu masuulka ka yahay. Waxaa isna ka hadlay oday soomaaliyeed oo halganka aad u taageeray aadna u sifeeyay xaqnimadiisa.
Waxaa intaa ka dib codbaahiyha lagu soo dhaweeyay Gudoomiyaha Ururka Haweenka Ogaadeeniya marwo Roodo Ibraahim Cabdi guray iyadoo aad ugu mahadcelisay qabanqaayasha shirka sida quruxda badan ee u soo abaabuleen. Waxay Gudoomiyaha UHO aad ugu dheeraatay doorka haweenka uu ku leeyahay halganka iyo sida ay mar walbaba u yihiin kuwa aadka loo waxyeeleeyo gumaysiguna kaga aargoosto dharbaaxada ka soo gaadha CWXO. Abwaanadu waxay haweenka ogaadeeniya kula dardaarantay inay u adkaystaan dhibka ku soo gaadha halganka.
Waxaa kaloo codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha jaaliyada Sydney halgame Shugri Shafeec Dubad oo ah Waaya-arag aad ugu dhuun duleela arimaha Itoopiya. Wuxuu salaan ka dib warbixin dadku aad ugu diirsaday ka soo diyaariyay qorsha uu damacsan yahay gumaysiga Itoopiya oo ah inuu qayraadka Ogaadeeniya Ilaahay ku manaystay uu ku masruufto caruurtiisa kuweenana gaajo iyo xabad ku laayo. Wuxuu ku soo gabagabeeyay isagoo meela badan diirada saaray in isha lagu hayo hagardaamooyinka gumaysiga.
Waxaa kaloo lagu soo dhaweeyay xoghayaha guud OSYU oo si aada ugu mahad celiyay jaaliyada Victoriya, wuxuuna warbixin waafiya ka bixiyay guud ahaan ururka OSYU hawlihiisa halgan iyo marxalada uu marayo. Wuxuu xoghayuhu sheegay inay bulshada Ogaadeeniya ogtahay waxay dhalinyaradu qabatay, gumaysigana wuu ogyahay wuxuu yeeley. Wuxuu Xoghayaha OYSU kula dardaamay dhalinyarada inay hawlaha halganka sii dardargaliyaan.
Intaa ka dib waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay naftii hure Nuur faatule, oo aad uga waramay xaalada ka jirta gudaha Ogaadeeniya iyo shacabka gumaysi diidka go’aanka uu ka qaatay gumaysiga Itoopiya iyo xaalada ay naftood hurayaasha ku halgamaan iyo iyo sida geesinida leh ay naftooda u hurayaan. Wuxuuna naftii huruhu ku guubaabiyay jaaliyadaha dibada inay isa sii raaciyaan gumaysigan gabalkiisu dhacay.
Waxaa intaa ka dib codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay afhayeenka JWXO naftii Cadaani Hiirmooge oo isagu ka warbixiyay xaaladaha uu halganku marayo iyo guud ahaan arimaha Geeska Afrika iyo hardanka siyaasadeed ee ka socda iyo saamaynta uu halgankeena ku leeyahay. Wuxuu Afhayeenka dadkii fadhiyay shirka fogaan dheer uga ifiyay marxaladda la marayo. Waxaa isna borobagaadada gumaysiga iyo siday caqliga uga fogtahay aad u dul istaagay mudane Maxamed Mursal oo arimahan aqoon dheer uleh.
Waxaa intaa guubaabo iyo baraarajin dadka qiiro galiyay ka soo jeedinayay abwaanada Ogaadeeniya sida Roodo Afjano, Kaldeeq Muuse, Cabdi samad Ibraahim jeemis.
Guud shirkaas wuxuu maalintii koowaad ku gabagaboobay jawi farxad leh.